Eminönü Alibeyköy Tramway Construction Emechaala n'agbanyeghị okuku | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulEminönü Alibeyköy Tramway Construction Emechaala n'agbanyeghị okuku
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, tram
a na-emecha eminonu alibeykoy tram n’agbanyeghi
Na mpaghara 1 km nke Eminönü - Alibeyköy Tram, nke İBB na-ewuru ya, ọdịda na ndagide mere n'ihi ọrụ ndị gara aga. Akụkụ a, nke na-adabaghị na sistem ụyọkọ ahụ mebiri emebi wee malite ịrụ ọrụ ọzọ. N’agbanyeghi nke a, ebum n’obi ya iji mezue usoro ụgbọ oloko ahụ na njedebe nke afọ dịka emebere ya.
Emere usoro owuwu ihe a site na idozi nsogbu ego na Eminönü - Alibeyköy Tram Line, onye ọrụ owuwu ya malitere na 2016 site na Ngalaba Obodo Metrolọ Ọrụ Istanbul (IMM). Ka osiladi, enwere nsogbu nsogbu teknụzụ dị mkpa maka arụ ọrụ nke eriri ahụ.
Ekpebiela na 2018 km nke usoro ụgbọ oloko nke emechara n’Ọktoba 1 nwere oche kwụ ọtọ, nsogbu na mkpọda nke na-adịghị anọdụ n’elu sistem n’usoro nke ga-egbochi ọrụ ụgbọ ala na mpaghara ala dị n'okpuru ntọala ugbu a na ọkwa ụgbọ ala.
Ememe mgbalị iji dozie nsogbu ahụ ngwa ngwa, maka usoro na-echekwa nrụpụta ahụ. Ka ọ dị ugbua, ndị injinia IMM na ndị ọkachamara agụmakwụkwọ nke Mahadum Sakarya duziri nha ahụ na ule nyocha n'ọhịa ahụ.
N'ihi nyocha a, echebara ọnọdụ dị oke egwu a na-ekwu okwu ya na Hali; echiche; N'oge usoro ọrụ ahụ, a na-ekpebisi ike na nyocha ala na nyochaghị n'ọhịa zuru oke. Achọpụtala na usoro a na -agaghị agbagharị na ala nke na-aga n'ihu ihe dịka afọ 1,5 gbochiri nsogbu ahụ iji dozie usoro ndị ọzọ yana tram nwere nnukwu ihe egwu maka nchekwa arụmọrụ.
N'ụbọchị ikpeazụ, a na-echekwa ya
N'ihi nyocha zuru oke na nyocha nke ọrụ aka zuru ezu, a na-ebu amụma ngagharị ala ka ọ ga-abawanye na oge. Maka nke a, achọpụtara na ụzọ kachasị mma ga-adị bụ ịmaliteghachi akụkụ 1km nke eriri ahụ na-adịghị anọdụ na sistem ahụ. Ihe omimi gosipụtara ka ọ bụ usoro edozi emebere ka emejuputa ya ka ọ bụrụ usoro na-agaghị ekpughe nsogbu ndị a na-enwe n’oge gara aga.
N'ọnọdụ a, tram superstructure ụgbọ ala na ọrụ nkwonkwo agbakwunyere malitere n'etiti Balat-Ayvansaray, nke emechara na 2018 n'ọhịa. Mgbe ahụ, a ga-amalite ikpo okpuru ala n’okpuru ụgbọ ala.
N’agbanyeghi oru ndi ozo, nke gha aghaghi ime na mpụga ọrụ ahụ, IMM ga - eji ndị otu na akụrụngwa ọzọ wee mee ka ndị bi n’obodo Istanbul nwee ngwụcha afọ a.
eminonu alibeykoy tramta map
Nkwupụta obi ike: Eminönü-Alibeyköy Tramway Construction, Electromechanical na ụgbọ ala ịzụta
Ule Nwale Na Eminonu Alibeykoy Tram Line
Eminonu-Alibeykoy tram line ga-agwụ na ọnwa 30
Eminönü-Eyüp-Alibeyköy tram line ẹkenam
Eminönü-Alibeyköy Tramway ọrụ malitere
Usoro Çed amalitela na Eminönü Alibeyköy Tram Line Project
Eminönü-Alibeyköy Tram Line ama akactioned
Usoro EIA amalitela maka obi ebere maka iwu nke Eminönü - Project Project Line nke Alibeyköy
Eminönü - Alibeyköy Tram Line Project Ọ dịghị EIA achọrọ maka owuwu ụlọ…
Eminönü - Alibeyköy Tramway Project Construction na electromechanical works…
Ihe ị na-amaghị banyere Eminönü-Alibeyköy Tram Line (Video)